के Twitter बाट ब्याकलिङ्क प्राप्त गर्न सम्भव छ?
तपाईंको व्यापार अनलाइनको विकास गर्न केवल युद्धको मात्र आधा छ. त्यस पछि, तपाइँलाई आफ्नो साइट खोज बिट्सका लागि र तपाईंको सम्भावना क्लाइन्टका लागि दृश्यात्मक बनाउन आवश्यक छ. सौभाग्य देखि, यस उद्देश्यका लागि खोजी इन्जिन अनुकूलन कार्य गर्दछ. विशेष गरी ब्याकलिङ्कले तपाईंलाई ब्रान्ड जागरूकता सुधार गर्न र तपाईंको वेबसाइट पेजहरूमा लगातार ट्राफिक प्रवाहलाई आकर्षित गर्न मद्दत गर्न सक्छ. Google को शीर्ष नतिजाहरूमा प्राप्त गर्न, अन्य चीजहरू बीचमा तपाईलाई उच्च PR साइटहरु जस्तै Google+, Facebook, Twitter, र अन्य बाट उच्च गुणस्तर ब्याकलिङ्क चाहिन्छ। - ludoteche cosenza. यस्तो उच्च-प्राधिकृत वेबसाइटहरूबाट सिग्नलहरूले Google लाई तपाईंको साइट कस्तो लोकप्रिय बनाउँछन्. Twitter लोकप्रिय, सम्मानित, र उच्च PageRank सोशल प्लेटफार्म हो जसले तपाईंको साइट धेरै गुणस्तर लिङ्क रस प्रदान गर्दछ. यहाँ तपाईं कुनै पनि प्रतिशत भुक्तानी नगरी धेरै उच्च गुणस्तर ब्याकलिङ्कहरू उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ. तपाइँलाई आवश्यक सबै कुरा एक आकर्षक ट्वीटर रचना गर्नको लागि हो, तपाईंको डोमेनमा ब्याकलिंकहरू घुसाउनुहोस्, र यदि यो सम्भव छ कि धेरै प्रासंगिक हैशैग सम्भव छ.
यस आलेखमा, हामी ट्विटर बाट तपाईको साइटमा ब्याकलिङ्क कसरी प्राप्त गर्न थप विस्तृत छलफल गर्नेछौं. आशा, यो जानकारीले तपाईंलाई आफ्नो वेबसाइट रेटिङ सुधार गर्न र अधिक सम्भावित ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न मद्दत गर्नेछ.
लिंक को लागी तपाईंको चहचहाना प्रोफाइल को उपयोग कसरि गर्नुहोस?
चहचहाना एक लोकप्रिय सामाजिक प्लेटफार्म हो जसले ब्याकलिङ्कहरू लाई यसको माध्यमद्वारा बनाउन अनुमति दिन्छ. यो तपाईंको प्रोफाइलमा दुई स्थान प्रदान गर्दछ वेबसाइटको लिङ्क थप्न. पहिलो एक प्राथमिक प्रोफेशन फिल्ड आफै हो, र दोस्रो जैव सेक्शन मा 160 वर्ण भित्र छ. यसबाहेक, तपाईंले साइट प्रोफाइलहरूको लागि चहचहाना प्रोफाईलबाट डाटा टाँस्न सक्नुहुनेछ. वेब स्रोतहरूले जुन ट्विटरबाट जानकारी लिन्छन् समावेश गर्दछ Twellow, Klout, TwitterCounter, Twitaholic, र Favstar.
यदि तपाईसँग अझै पनि यी वेब स्रोतहरूमा कुनै खाता छैन भने, तपाईंको ट्विटर प्रोफाईल सेट अप गर्नुहोस् वा तपाईंको साइटमा लिङ्कहरू दुवै वेबसाइट फिल्ड र जैव समावेश गर्न यसलाई परिमार्जन गर्नुहोस्।. यसबाहेक, तपाइँका ग्राहकहरूलाई सोध्नुहोस्.
तपाईं ट्विटरमा दिमाग निर्माण लिङ्कमा राख्नु पर्ने थुप्रै पक्षहरू छन्. सबैभन्दा पहिले, तपाईंले यस सामाजिक प्लेटफर्ममा प्राप्त गर्न सक्ने लिङ्कहरूको सबैभन्दा ठूलो रकम होईन. यसको मतलब तिनीहरूले उनीहरूको साइटमा ट्राफिक पास गर्दैनन्. तथापि, उच्च पीआर साइटबाट कुनै पनि लिंकहरू अझै पनि तपाईंको साइटमा ठूलो मूल्य छ र खोजी इन्जिनहरू देखाउँछन् जुन तपाईंको डोमेनले खोजी परिणाम पृष्ठमा उच्च श्रेणीको योग्यता पाउँछ।. ट्विटरमा लिङ्क निर्माणको बारेमा अर्को कुरा यो हो कि सबै लिङ्कहरू यहाँ बोल्ड URL जस्तो देखिन्छ जस्तै कीवर्ड एंकर पाठको साथ लिङ्कको विरोध. यसैले तपाईंलाई निश्चित गर्न आवश्यक छ कि तपाईंको URL पढ्न योग्य, स्पष्ट र अनुकूलित हो.
ट्विटरमा लिङ्कहरू सिर्जना गर्ने प्रक्रिया निम्न चरणहरू हुन्छन्:
तपाईंको ट्विटर खातामा लग इन गर्नुहोस् र तपाईंको लिङ्क (1 9)
तपाइँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ केहि मनोरञ्जन र आकर्षक पाठ, न केवल एक लिङ्क. तपाईंको ट्वीटर पोस्ट भएको बेला, यो जानकारी तपाईंको अनुयायीहरूको लागि उपलब्ध हुनेछ.
लक्षित कीवर्ड (1 9)
ह्याटिक्स प्रयोग गर्न महत्त्वपूर्ण छ जुन तपाईले चाहानुहुन्छ प्रत्येक पर्याप्त र उच्च-भोल्युम कीवर्ड सर्पमा सर्भर द्वारा प्रयोगकर्ताहरूले Twitter कार्यान्वयन गर्ने हैशगेजहरू खोज्छन्. वैसे, तपाईं पनि आफ्नो लिंक ह्यागग्याग गर्न सक्नुहुन्छ.
आफ्ना अनुयायीहरू तपाईंको ट्वीट्सलाई रिट्याट गर्नुहोस् (1 9)
तपाईंको टाईसिङहरू खिच्दै. यदि तपाइँ लेखन प्रविधिमा प्रतिभा को कमी छ भने, त्यसपछि तपाइँका अनुयायीहरूलाई लिङ्कलाई प्रारम्भिक ट्वीटमा लिङ्क गर्न अनुरोध गर्नुहोस्.
नेविगेट गर्न को लागि नेविगेशन
TweetMeme एक वेब स्रोत हो कि खोजहरु र सबै भन्दा दिलचस्प ट्वीट्स. त्यसैले तपाईंको प्राथमिक उद्देश्य यो साइट पृष्ठहरूमा देखा पर्न, एक यादगार ट्वीटर सिर्जना गरिँदै छ.